ကြောက်စရာကောင်းသော ယောက်ျားမာယာ | Ta Pwint Pan
Ta Pwint Pan
တစ်ပွင့်ပန်း ဆိုဒ်မှ – နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါ၏
HomeContact MeintroductionIT-Ebook စုဝေးရာTotal Website
January 6, 2013	By kokyawzin	ဘာဖြစ်လို့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ယောက်ျားမာယာလို့ အမည်ပေးရသလဲဆိုတော့ မွေးကင်းစကလေးငယ်ကနေ ဘုံ(၇)ဆင့်၊ တိုက်အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ဘယ်ယောက်ျားလေးမှ မတွေ့မမြင်ဖူးအောင် ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ မိန်းကလေးကို ဖျက်ဆီးဖို့ရန် ကြံစည်နိုင်တဲ့ ယောက်ျားတို့ရဲ့ မာယာဟာ ပေါ့သေးသေးမဟုတ်တာကြောင့် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ယောက်ျားမာယာလို့ အမည်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီလို မာယာရှိတဲ့ ယောက်ျားများ ကမ္ဘာပေ…ါ်တွင် ရှိနေတယ်ဆိုတာကို မိန်းကလေးများသိရှိပြီး သတိထားရှောင်ကြဉ်နိုင်စေရန်ရေးသားတင်ပြပေးလိုက်တာပါ။
ယောက်ျားလေးတွေအကြောင်း မရေးလို့လည်း မဖြစ်ပြန်ပြန်ဘူးလေ။ မနေ့က မိန်းမပျက်အင်္ဂါ(၂၅)ချက်ကို ဇာတ်တော်ထဲမှ ကောက်နှုတ်တင်ပြပေးခဲ့ရာ ယောက်ျားသားများမှ မိန်းမသားများအတွက် ရှောင်ကြဉ်စရာရေးပြီးရင် မိန်းမသားများအနေနဲ့လည်း ဘယ်လိုယောက်ျားသားများကို ရှောင်ကြဉ်ရမလဲဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှာဖွေရေးသားတင်ပြပေးပါဦးဆိုလို့ ခုလို ရေးသားတင်ပြပေးလိုက်တာပါ။
ဘယ်လိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ မာယာတွေလဲဆိုတာသိရအောင် ဇာတ်တော်ကို အကျဉ်းချုပ်ရေးသားပေးပါမယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို ပြီးဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်ရင် သိရပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခါက ရှင်ဘုရင်နဲ့ပုဏ္ဏားကြီးတို့ဟာ မိတ်ဆွေတွေမို့ နှစ်ဦးဆုံတဲ့အခါ ကြွေအန်ကစားလေ့ ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီလို ကစားတဲ့အခါ ပုဏ္ဏားကြီးက သူ့အိမ်မှာ မွေးစားထားတဲ့မိန်းကလေးဟာ ဘယ်သူနဲ့မှ မတွေ့မထိဖူး။ ဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီး ရွတ်ဆိုကာ အန်စာတုံးပစ်ကစားတယ်။ အဲဒီစကားဟာ မှန်ကန်နေတာမို့ ပုဏ္ဏားကြီးက အမြဲနိုင်ပြီး မင်းကြီး အမြဲရှုံးလေတယ်။
ဒါနဲ့ မင်းကြီးက ပုဏ္ဏားအိမ်မှာ ဘယ်ယောက်ျားလေးမှ မတွေ့မမြင်ဖူး၊ မတွေ့ထိဖူးတဲ့မိန်းကလေး ရှိမရှိကို စုံးစမ်းခိုင်းရာ ကလေးငယ်ဘ၀တည်းက ဘုံ(၇)ဆင့်တိုက်ပေါ်မှာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပုဏ္ဏားကြီးမှာရှိတယ်လို့ သိရတာနဲ့ မင်းကြီးက အရက်သေစာသောက်စားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီး သင်ဟာ ပုဏ္ဏားကြီးအိမ်က အမျိုးသမီးကို ဖျက်ဆီးပေးနိုင်မလား။ ပေးနိုင်ရင် ငွေပေးမယ်ပြောတော့ အရက်သမားက ရတယ်၊ မပူနဲ့၊ သူမာယာသုံးပြီး ဖျက်ဆီးနိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်လို့ပြောပြီး မင်းကြီးဆီက ငွေယူခဲ့လေတယ်။
အရက်သမားဟာ ပုဏ္ဏားကြီးအိမ်ရဲ့ အခြေအနေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ဘုံ(၇)ဆင့်စလုံးရဲ့ တံခါးမုခ်တိုင်းတွင် မိန်းမအစောင့်အရှောက်များသာထားပြီး ယောက်ျားဆိုရင် အနားမကပ်ရအောင် ပြုလုပ်ထားတာကို တွေ့ရတယ်။ အမှိုက်သွန်လှည်းကိုပင် အ၀င်အထွက်စစ်ဆေးတယ်။ ပုဏ္ဏားကြီးအိမ်က မိန်းကလေးရဲ့ အထိန်းတော်ကြီးတစ်ယောက်သာ ပန်းနံ့သာများဝယ်ရန် နေ့စဉ်အပြင်ထွက်ရတယ်။ ဒါနဲ့ အရက်သမားလည်း ဘယ်ရမလဲ၊ ယောက်ျားမာယာသုံးမယ်ဆိုပြီး ပုဏ္ဏားကြီးအိမ်အနီး လမ်းမတွင် ပန်းနံ့သာဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ကို ခမ်းနားစွာဖွင့်ထားလိုက်တယ်။
နေ့စဉ် အပြင်ထွက်ဈေးဝယ်ရတဲ့ အထိန်းတော်ကြီးဟာ ပန်းနံ့သာဆိုင်အသစ် ခမ်းခမ်းနားနားတွေ့ရတော့ စိတ်ဝင်စားပြီး လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ဆိုင်ရှင်အရက်သမားလည်း အထိန်းတော်မိန်းမကြီးကိုမြင်တာနဲ့ ခြေရင်းတွင်လှဲပြီး ခြေထောက်ဖက်ပြီး အမေရယ် ဒီလောက်ကြာအောင် ဘယ်သွားနေလဲ အမေ့ကိုရှာလိုက်ရတာ ကြာလှပါပြီလို့ပြောရင်း ငိုနေပါတော့တယ်။ အရက်သမား စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း နဘေးကလူတွေကလည်း အထိန်းတော်ကြီးကြားအောင် သားအမိဆိုတာ ဟုတ်မှာပဲ၊ မျက်နှာချင်းကလည်း ဆင်လိုက်တာလို့ပြောပြီး နဘေးကနေ တွန့်ပေးကြတယ်။ အဲဒီလို ဘေးက၀ိုင်းပြောပေးမှုကြောင့်အထိန်းတော်ကြီးဟာ မိခင်ပျောက်တဲ့ သားတစ်ယောက်လို့ ထင်မြင်လာပြီး သူပါရောငိုမိနေလေရဲ့။
ဒီလိုနဲ့ အရက်သမားနဲ့အထိန်းတော်ကြီးတို့ဟာ သားအမိလိုဖြစ်သွားကြတဲ့အခါ အရက်သမားက အထိန်းတော်ကြီးကို နန်းတော်တွင်းသာ သုံးဆောင်နိုင်တဲ့ အလွန်လှပတဲ့ ပန်းနံ့သာအမွေးအကြိုင်တွေ အခမဲ့ပေးပြီး စည်းရုံးလေတော့တယ်။ အထိန်းတော်ကြီးက အဖိုးတန်တဲ့ပန်းတွေ အများကြီးယူလာတော့ ပုဏ္ဏားကြီးရဲ့ မိန်းကလေးက ဒီပန်းတွေ ဘယ်ကရတာလဲလို့ မေးတဲ့အခါ ငါ့သား ပေးလိုက်တာ။ ဒါနဲ့ မိန်းကလေးက အမေ့သား ဘယ်အရွယ်လောက်ရှိပြီလဲလို့မေးတော့ သမီးနဲ့ရွယ်တူလောက်ပဲ၊ လူချော လူခန့်ကြီးလို့ ဖြေလိုက်တယ်။ ပုဏ္ဏားအဘိုးကြီးမှလွဲပြီး တခြားယောက်ျားလေး မမြင်ဖူးရှာတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ရွယ်တူယောက်ျားလေး၊ ခန့်ချောကြီးလည်းပြောလိုက်ရော စိတ်ဝင်စားသွားလေတယ်။
အဲဒီအချိန်ကစပြီး မိန်းကလေးဟာ လူချောလူခန့်ကြီးဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်နေမိတယ်။ အရက်သမားကလည်း မိန်းကလေးအခြေအန ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကို အထိန်းတော်ကြီး မေးတဲ့အခါ မိန်းကလေးက လှတယ်။ ကိန္နရီလေးလိုပဲ။ အထိန်းတော်ကြီးလည်း အရက်သမားက နေ့စဉ် မိန်းကလေးအကြောင်းမေးတာကို သတိထားမိပြီး စိတ်ဝင်စားနေမှန်းသိတဲ့အတွက် အဲဒီမိန်းကလေးကို တွေ့ရဖို့တောင် မလွယ်ကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ဒါနဲ့ အရက်သမားလည်း ရိုးရိုးနည်းနဲ့မရရင် ယောက်ျားမာယာ နောက်တစ်နည်းသုံးမယ်ဆိုပြီး ဆိုင်မဖွင့်ဘဲ နေလိုက်တယ်။
အထိန်းတော်ကြီး ပန်းလာယူတဲ့အခါ အရက်သမား ဘယ်သွားလို့ ဆိုင်မဖွင့်တာလဲ။ ဘာဖြစ်နေလို့လဲလို့ စုံးစမ်းကြည့်လိုက်တော့ နေမကောင်းမှန်းလည်းသိရော အရက်သမားထံ သွားမေးလေတယ်။ အရက်သမားက အထိန်းတော်ကြီးကို အကျွန်ုပ် မိန်းကလေးရဲ့ အလှအပကိုသာကြားရပြီး မမြင်တွေ့ရရင် သေရပါတော့မယ်။ အဲဒါကြောင့် အမေဖြစ်သူ အထိန်းတော်ကြီး ကူညီပေးပါဆိုပြီး မာယာအကုန်သုံးကာ ပြောပါလေတော့တယ်။
အထိန်းတော်ကြီးလည်း မနေနိုင်တော့တဲ့အဆုံး ကူညီပေးမယ်ပြောပြီး အရက်သမားကို အမှိုက်တွန်းလှည့်တွင်ထည်ကာ အပေါ်မှ ပန်းများနဲ့ဖုံးပြီး မိန်းကလေးအဆောင်တွင်း ခေါ်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ မိန်းကလေးလည်း အခန်းတွင်းမှာရောက်လာတဲ့ အရက်သမားကိုတွေ့တဲ့အခါ သက်တူရွယ်တူချင်းမို့ ချစ်ခင်မိသွားရှာတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ပုဏ္ဏားကြီးလာရင် အရက်သမားက ပုန်းနေပြီး ကျန်တဲ့ချိန်မှာ နှစ်ယောက်သား အကြည့်စိုက်နေလေရဲ့။
နှစ်ရက်သုံးရက်အတူနေပြီးတော့ မိန်းကလေးက အရက်သမားကို ပြန်ဖို့သင့်ပြီလို့ ပြောတဲ့အခါ ပုဏ္ဏားကို တံတောင်နဲ့ထောင်းပြီးမှ ပြန်မယ်လို့ ယောက်ျားဖြစ်ပေမဲ့ မာယာသုံးပြီး ကနွဲ့ကလျပြောတာနဲ့ မိန်းကလေးလည်း စီစဉ်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးလိုက်တယ်။ ပုဏ္ဏားကြီး မိန်းကလေးအခန်းဝင်လာတဲ့အခါ မိန်းကလေးက စောင်းတီးပေးပါ၊ ကချင်တယ်လို့ပြောတာနဲ့ ပုဏ္ဏားကြီးက ကောင်းပြီ တီးပေးမယ်ဆိုပြီး စောင်းတီးပေးနေလေတယ်။ ဒါတင်မကဘဲ မိန်းကလေးက သူကတာကို ပုဏ္ဏားကြီးမြင်မှာ ရှက်တယ်။ တစ်ယောက်တည်း ကချင်တယ်ဆိုပြီး ပုဏ္ဏားကြီးမျက်နှာကို အ၀တ်စည်းထားလိုက်တယ်။
မိန်းကလေးက ပုဏ္ဏားကြီးအနား မထိတထိ ကတဲ့အခါ ပုဏ္ဏားကြီးခများ ပျော်နေရှာတယ်။ မိန်းကလေးက ပုဏ္ဏားကြီးရဲ့ နဖူးပြောင်ပြောင်ကြီးကို တံတောင်နဲ့ထောင်းချင်လိုက်တာ၊ အူယားနေတာပဲလို့ ပြောတဲ့အခါ ပုဏ္ဏားကြီးက ထောင်းစေဗျာ၊ ထောင်းစေဗျာလို့ ပြောရှာလေတယ်။ ဒါဆို ထောင်းမယ်နော်လို့ပြောပြီး ပုန်းနေတဲ့ အရက်သမားကို ခေါ်လိုက်တဲ့အခါ အရက်သမားက ပုဏ္ဏားကြီးနောက်ကျောမှရပ်ပြီး ဦးခေါင်းကို တံတောင်နဲ့ တအားထောင်းလိုက်တယ်။ ပုဏ္ဏားကြီးမှာ နာလွန်းလို့ ‘’အားခနဲ’’နဲ့ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ ဒီလက်ဟာ မိန်းကလေးလက် မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောတဲ့အခါ မိန်းကလေးက ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီမှာကြည့်ဆိုပြီး လက်ကို ထိုးပေးလိုက်တယ်။ ပုဏ္ဏားကြီးက ဟုတ်ပါရဲ့၊ လက်ကလေးက နု့ညံ့လိုက်တာ။ ထောင်းလိုက်တော့လည်း နာလိုက်တာနော်ဆိုပြီး ဖြစ်နေရှာလေရဲ့။
အရက်သမားလည်း မိန်းကလေးကို ဖျက်ဆီးပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ရှင်ဘုရင်ကို အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ရှင်ဘုရင်နဲ့ပုဏ္ဏားကြီးတို့ ကြွေအန်ကစားတဲ့အခါ ပုဏ္ဏားကြီး အရင်လိုရွတ်ဆိုပေမဲ့ မှန်ကန်တဲ့စကား မဟုတ်တော့တာကြောင့် ရှုံးလေတော့တယ်။
ဒါကတော့ ယောက်ျားတွေဟာ သူတို့လိုချင်တာ၊ ဖြစ်ချင်တာဆို မရ, ရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီး တရားတာ၊ မတရားတာ နားမလည်ဘဲ မာယာသုံးပြီး ယူလေ့ရှိတယ်ဆိုတာကို သိထားဖို့ရန်အတွက် ဇာတ်တော်ထဲကနေ ကောက်နှုက်တင်ပြပေးလိုက်တာပါ။ ဇာတ်တော်အကျယ်ကို ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ (အဏ္ဍဘူတဇာတ်၊ ဇာတကအဋ္ဌကထာ၊ ပထမအုပ်၊ စာမျက်နှာ(၃၀၈)တွင် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ ယောက်ျားမာယာကို သဘောပေါက်နားလည်မယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့မာယာများကိုလည်း နည်းယူပြီး နားလည်စွာနဲ့ လူမိုက်ယောက်ျားများ ဖျက်ဆီးမှဘေးကနေ မိန်းကလေးများ ရှောင်ကြဉ်နိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
Credit by အေးချမ်းမွန်မှ နှလုံးသားအာဟာရ
This entry was posted in ချစ်မှုရေးရာ. Bookmark the permalink.
← ကွက်လပ်ဖြည့် မေတ္တာ	မျက်စိကျန်းမာရေး နှင့် စားသင့်သော အစားအစာများ →
မင်္ဂလာပါ	ကျွန်တော်ဆိုဒ်သို့ ရောက်လာသူအပေါင်း
စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်
ပြီးပြည့်စုံကာ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါ
Top Posts Total Website	Recent Posts	‎” အမေ့လက်များ “
သင့်ဆီက သင့်မေမေ ဘာတွေလိုအပ်နေလဲ?
ထမင်းစားပြီး ရှောင်ကြဉ်ရမည့် အလေ့အထများ
မိန်းကလေးတွေ ကြိုက်စေမဲ့ ယောကျာ်လေးရဲ့ အရည်အသွေးများ
Admin kokyawzinVisitors	63,025 hits
WordPress.com	မြန်မာအီးဘွတ်ခ် ၀က်ဆိုဒ်	Blogroll